Ku duubo wax soo saarka maqalka leh RecordMyDesktop | Laga soo bilaabo Linux
Duub wax soo saarka maqalka ee RecordMyDesktop
@Jlcmux | | Aplicaciones, GNU / Linux, Kuwa kale, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Marar badan ayaan la kulmay waxaan doonayaa inaan duubo shaashadayda laakiin ma doonayo in makarafoonku duubo laakiin inaan duubo waxaan ka dhagaysto ciyaartoygayga, YouTube-ka, iwm.
Hagaag halkan ayaan ku xallin doonnaa.
Marka hore waxaan rakibnaa xakamaynta (hadaanan haysan)
Markaa waan yeeli doonnaa DiiwaankaMyDesktop waxaanan bilownay inaan duubno caadi.
Intaad wax duubeysid, waanu fureynaa xakamaynta (ku jira tabka mareegaha badan ee ku yaal liiska codsiyada) oo aad tag tabta Duubista. Waxaan gujineynaa qalabka duubista ee caadiga ah oo aan dooranno Kormeeraha Analogga Maqalka ee Gudaha.
Markaad sidan sameyso qaabeynta ayaa la keydiyaa, markaa haddii aad goor dambe rabto inaad kuqorto makarafoonkaaga waa inaad sameysaa nidaamka xulashada makarafoonka dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Duub wax soo saarka maqalka ee RecordMyDesktop
Maxaa xog fiican ah !!!
Waxaan wax ku duubaa RecorMYDesktop laakiin weligey cod fiican ma helo, had iyo jeer waa shit. Waxaan doonayaa inaan isku dayo mahadsanid caarada 😉
waxaa ku qoran "RecordMyDesktop" haha ​​Weli waan hurdaa xD
Markale waad salaaman tihiin.
Kaliya waxaan tijaabiyey talada aad ku siiso maqaalkaaga. Waxaan hayaa kambiyuutar Logitech 9100 oo leh makarafoon sitiriyo ah, laakiin weligay ma awoodin inaan ogaado sida loo doorto si aan ugu duubo casharro fiidiyoow ah.
Mahad badan! Waxay u shaqeysaa sida soojiidashada. Berri waxaan rajeynayaa inaan tijaabiyo talooyinka aad isiisay ee ku saabsan jawaabta faalladayda koowaad ee OpenShot. Haddii ay si fiican u shaqeyso markaa aad ayaan uga farxad badnaan doonaa sida aan hadda ahay.
Waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doonto inaad la wadaagto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan duubista iyo waxaas oo dhan halkan laga bilaabo FromLinux
Waxaan iskula jawaabayaa naftayda maxaa yeelay waxaan ku shubay dhalo (tan waad ku fahantay) labada maqaal. Faallooyinka aan hadda sameeyay, wixii aan sameeyay ayaa lagu dhaqmay waxa aad ku tiraahdo halkan, tan: maqaalkaagii labaad. Taas waxaan kuugu mahadcelinayaa faalladii hore.
Hadda waxaan tijaabinayaa taladii aad igu siisay maqaalkaagii ugu horreeyay ee ku saabsan sida looga saaro shaxda madow ee ku taal OpenShot. Barnaamijku wuxuu hadda dhoofiyaa fiidiyowga. Waan sugi kari waayey ilaa berri (sidaan hadda uun ku idhi faalladaydii hore).
[Daqiiqado kadib] WAY SHAQEysay !!! WAAD MAHADSAN TAHAY !!! Hadda waxaan sameyn karaa fiidiyowyo tayo leh oo leh maqal iyo muuqaal wanaagsan. Mahadsanid!
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku caawiyo.
Waxaan rajaynayaa inaad soo geliso xoogaa baabuur duug ah oo wanaagsan oo aad nala wadaagto.
WAAD MAHADSAN TAHAY Waxay ila shaqeysaa waxyaabo yaab leh, waan awoodi kari waayey inaan duubo codka gudaha ee qalabka muddo.
Hadda, si aan runta u sheegaa maahan wixii aan raadinayay. Sideen ku sameeyaa, si aan ugu duubo makarafoonka iyo codka gudaha isla waqtigaas? Sida Camtasia oo kale.
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto.
Waxaad u raadisay sida, isla su'aasha, duub labadaba isla waqtigaas!
Ku jawaab Mexico
Waxay ahayd uun wixii aan u baahnaa, codka lama duubin oo hadda HAA
Qalab lagu maareeyo laguna dhiso feylka "authz" ee keydadka SVN